I-Cozycomo Chang dao - Pha Mok - I-Airbnb
I-Cozycomo Chang dao - Pha Mok
UTrin unezimvo eziyi-49 zezinye iindawo.
Esi sitayile sithandekayo sesiNgesi, indlwana yeenkuni zeteak ikwiSithili saseChiang Dao iikhilomitha ezingama-80. emantla edolophu yaseChiang Mai. Yakhiwe ukusuka kwindlu yakudala eyenziwe ngamaplanga yinkosi yamatye kaChiang Dao, le ndlu ibonelela ngobuchwephesha obudumileyo bobuchwephesha bamaplanga kumgangatho wayo omhle kunye neendonga.
Indlu ithatha iindwendwe ezi-3 okanye ezi-4 ezongezelelweyo. Igumbi lokulala elingaphantsi kophahla elineefestile ezimbini ezigayiweyo linebhedi enkulu yokumkanikazi kunye nebhedi enye kwibalcony yokulala ethatha umbono omangalisayo weChiang Dao Peak kunye neentaba ezingqongileyo. Ukuya kumgangatho wokuqala kukho igumbi lokuhlala elinesitulo esikhulu somthi womntla esinokuthi sisetyenziswe njengendawo yokulala yondwendwe lwangaphambili, ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo kunye neseti yesidlo sangokuhlwa, indlu yangasese enye kunye negumbi lokuhlambela elineshawa eshushu. IBar-BQ okanye indawo yokutyela engaphandle inokonwatyelwa kwigadi enkulu yepropathi. Iindwendwe zinokuzama ukusebenzisa le ndawo njengendawo yokumisa iintente ukonwabela ukuzola kweentaba kunye nezigidi zeenkwenkwezi ngobusuku obungenanyanga.
Imitsalane kunye neMisebenzi,
Le ndawo isemazantsi enduli yeentaba zeChiang Doa ecaleni kweNdawo yasendle yaseChiang Doa. Iimonki ezininzi zamaBhuda zikule ndawo. U-Baan Tum ubizwa ngokuba yi "Sappaya" eBali, oku kuthetha indawo efanelekileyo yokwenza izinto zokomoya. Kwiminyaka engama-80 eyadlulayo, obekekileyo uTaan Ajarn Munn wakhokelela abafundi abangama-30 okanye ngaphezulu ukuba bachithe iLente yobuBhuda apha. Eyona tempile idumileyo yiTempile yeWat Tum Pa Plong kwiNtaba yeChiang Dao apho uVenerable Loung Poo Sim, umfundi omncinci kaTaan Ajarn Munn, wayehlala kwaye efundisa amashumi eminyaka.
Ukuhamba: Phonononga i-Doi Lung Chiang Dao. Iikhilomitha ezili-14. Emantla kwilali yaseBaan Tum, iBaan Ra-beang Dao kulapho unokujonga khona lonke udidi lweentaba zeChiang Dao ukusuka kwindawo omi kuyo. Unokuba nesidlo sasemini apha okanye uququzelele uhambo lokuhamba kunye nabakhokeli abanamava aphezulu ukuze uhlole iChiang Dao National Park enokuhlala usuku okanye ezimbini.
Iindwendwe zingasebenzisa indlu yonke kunye negadi yayo.